युरोप र रसियालाई जोड्ने युरोपकै लामो पुल निर्माण, पुटिनद्वारा उद्घाटन | Automotive News Nepal
युरोप र रसियालाई जोड्ने युरोपकै लामो पुल निर्माण, पुटिनद्वारा उद्घाटन ३ जेठ, २०७५
क्रिमिया - क्रिमियालाई रसिया मुलभुमिसँग जोड्ने नयाँ १९ किलोमिटर लामो पुल औपचारिक रुपमा खुल्ला भएको छ । यो युरोपको सबैभन्दा लामो पुल हो । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफैले ट्रक चलाएर पुलको उद्घाटन गरे ।
१०,००० मानिसहरुले यो परियोजनामा काम गरेका छन् । सबैभन्दा पिक लोड हुदाँ १५,००० मानिसहरु थिए ।
पुलको दुई भाग छ । एउटा यातायात बाहनको लागि हो । यो भाग यही हप्ताबाट खुल्नेछ । अर्को भाग रेलको लागि हुनेछ । यो भागको निर्माण भने अर्को वर्ष सकिनेछ । सम्पूर्ण सुरक्षा जाँच र इन्जीनियरिङ्ग गुणस्तरको लागि आगामी केही महिनासँग ठूला ट्रकहरुलाई यो पुलमा रोकिनेछ ।
क्रिमिया प्रायद्विपलाई प्रत्यक्ष रुपमा रसिया मुलभुमिको क्रस्नोदार क्षेत्रसँग जोड्ने यो पुललाई रसियामा महत्वपूर्ण सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माण मे २०१५ बाट शुरु भएको थियो ।
अधिकतम क्षमतामा आउदाँ पुलमा दैनिक ४०,००० यातायात आवतजावत हुनसक्छन् । यो पुल हुदैं प्रति वर्ष १.४ करोड मानिसहरुले रेलसेवा उपयोग गर्नेछन् । साथै यहाँबाट १.३ करोड टन सामान ढुवानी हुनेछ ।
यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि १२.३ कि.मी. रहेको पोर्चुगलको भास्को दा गामालाई उछिनेर यो पुल युरोपको सबैभन्दा लामो पुल भएको छ ।
सिन्डिकेट रोक्न कडा कानुन आउने, थाहा छ के हो सिन्डिकेट ?
काठमाडौं – सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायीलाई लक्षीत गरी सरकारल...
सन्दर्भ : विश्व मजदुर दिवस - स्वरोजगार अटो मेकानिक्सको व्यवस्थापन वारेमा न्यौपानेको विचार
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५९ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न याता...
साउनदेखि कलंकीको अण्डरपास खुल्ने
काठमाडौं - कलंकीमा अन्डरपास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साउ...